Umphathi Womsebenzi we-MAC, Funda Konke Okudingayo ▷➡️ Abalandeli ▷➡️
I-MAC Task Manager, funda konke okudingayo
I-Mac Task Manager uhlelo lokusebenza olwaziwa ngaphansi kwegama elithi Activity Monitor; kodwa ngemisebenzi efana naleyo enikezwe uhlelo lokusebenza lwe-Windows; Sizokutshela ngesihloko, ukuthi ungayivula kanjani kanye nawo wonke amathuba anikezwa yileli thuluzi, ngokuvakasha kwalesi sihloko.
2 Ungafika kanjani ku-Task Manager Mac?
3 Ulwazi oluqukethwe
3.1 Ikhompyutha noma i-CPU
3.3 Amandla noma Amandla
3.4 I-Hard Disk
3.5 Inethiwekhi noma uxhumano lwe-inthanethi
4 Ukusebenzisa I-Activity Monitor
5 Izinsiza Ezifihliwe Zokusebenzisa
Abantu abaningi bajwayelene nomphathi wemisebenzi ngaphakathi kohlelo lokusebenza lweWindows; kodwa abazi ukuthi iyini i-Mac Task Manager.
Kulokhu sizokhuluma ngaleli thuluzi elifana nokusebenza kweWindows, kodwa elihlonzwa njenge-Activity Monitor, elinomsebenzi omkhulu osivumela ukuthi sazi ngokuqondile ukuthi kwenzekani ngaphakathi kwekhompyutha, esebenza nohlelo lwe-MacOs.
Sizothatha uhambo ukuze bakwazi ukwenza konke okusemandleni alo qapha lomsebenzi; lapho uzoba nakho konke ukulawula ezandleni zakho, ngenxa yalokho uzokwazi ukwazi ukuthi yini ukusebenza kwe-CPU yakho, ukusatshalaliswa kwezinsiza zayo ngokwe-RAM ngisho nezindleko zamandla ngesikhathi sokusebenza kwe-hard disk noma uma nje uxhumeke kunethiwekhi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwazi ukusebenza Mac Task Manager; lula ukuzimisela kokubili izinkinga zobuchwepheshe kanye nokusebenza; ngokubheka ukusebenza ngesikhathi, ukuphoqa ukuvalwa kwezicelo uma kunesidingo, ukugwema ukuphahlazeka; ngendlela efanayo nokunquma ukuba khona kwezinhlelo eziqhuba umsuka ongabazisayo.
Ungafika kanjani ku-Task Manager Mac?
Kunezindlela ezimbalwa zokufika kumonitha yomsebenzi, njengoba kukhonjisiwe ilingana nomphathi womsebenzi we-Mac; noma iyiphi yazo iyasebenza futhi kungenzeka ukukhetha leyo ekhululekile kakhulu kumsebenzisi ngamunye.
Okokuqala, sibonisa ukuthi bangakwazi sebenzisa Ukubukeka; kuyodingeka kuphela ukuthayipha:
Umyalo + Isikhala.
Thayipha Imonitha Yomsebenzi Kusitholi.
Cindezela u-Enter ukuze uvule uhlelo lokusebenza.
Nokho, enye indlela elula kungaba ukuvele uchofoze engilazini yokukhuliswa ngokuvamile evela ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesikrini sekhompyutha, ukuze ubonise indawo lapho isihloko osifunayo sizobhalwa khona.
Indlela elandelayo yokufika kumphathi wemisebenzi ye-Mac wukucinga ngqo ifolda ebizwa ngokuthi Izinhlelo zokusebenza; ngaphakathi kwazo uzoba nezinsiza futhi kukule ndawo ngqo lapho kuzovela khona isithonjana esikhomba i-Activity Monitor, esizochofozwa kabili ukuze usifinyelele.
Ukufingqa ngale ndlela yokugcina yokuvula nokusebenzisa leli thuluzi lokuphatha umsebenzi, kulandela ngokohlelo:
Ifolda Yezinhlelo Zokusebenza, chofoza kabili; kamuva Izinsiza, chofoza kabili futhi ekugcineni Umsebenzi Wokuqapha, ukuthi ngokuchofoza kabili; izovulelwa ukufinyelela.
Uma ngendlela efanayo ufuna enye indlela yokufinyelela, ungafinyelela kuyo, nge-Launchpad, lapho enye ifolda ikhona, futhi kuzoba nesithonjana sokufinyelela ku-Activity Monitor, esizovuleka ngokuchofoza okukodwa nje.
Uma sesiku-monitor yomsebenzi we-Mac; Singasebenzisa ngokunenzuzo wonke amathuba anikezwa yilolu hlobo lwethuluzi, okuthi, njengoba negama lalo libonisa, lisivumela ukuthi siqaphe noma siphathe, njengasendabeni yeWindows, yonke imisebenzi eyenziwa yi-CPU kanye nengxenye yayo ngayinye eyinhloko. .
Sizokwazi ngendlela elula, ithebhu ngayinye ekhona njengengxenye yaleli thuluzi; ukuze uhlole ngokuhlelekile konke ukusebenza okujwayelekile kwekhompyutha.
Ikhompyutha noma i-CPU
Uma sesiku-Activity Monitor, okukhomba ukuthi imayelana nazo zonke izinqubo zedivayisi; sibona ngeso lengqondo kuthebhu yayo yokuqala igama elithi CPU, elihambisana nolwazi olujwayelekile lwekhompiyutha, lapho kungenzeka khona ukuqapha ukusetshenziswa kwezinsiza nokuthi ziphathwa kanjani kuzo zonke izinqubo.
Igqama phakathi kwezinye izakhi; yiziphi kulezi zinqubo ezisebenzayo, kanye nephesenti lezinsiza ezisetshenziswa kuzo, into ebalulekile; ikakhulukazi uma i-CPU isebenza kancane kakhulu.
Iningi lolwazi lihambisana namagrafu, lapho izintambo, i-% yokusetshenziswa kwesistimu yokusebenza, izinhlelo zokusebenza namanye amathuluzi nazo zigqanyisiwe; konke lokhu ngokuhlangene kusivumela ukuthi sibe nombono wokuthi iqembu lonke lithuthuka kanjani.
Njengoba ithuluzi Lokuqapha Umsebenzi lashiwo, lihlinzekwa ngamathebhu angasetshenziswa umsebenzisi; eyokuqala esiyibonile kwakuyi-CPU, manje sekuyithuba lethebhu elihambisana neMemori.
Ngaphakathi kwalesi sigaba kuyenzeka ukwazi ukuthi ingakanani inkumbulo engokomzimba noma i-Ram esetshenziswayo, kanye nenkumbulo esetshenziselwa ukugcina izinhlelo, amafayela ayingxenye yenqolobane futhi ekugcineni isikhala sokushintshwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi inkumbulo ye-Ram iyona egcina isikhashana lonke ulwazi oludingekayo ukuze kwenziwe izinhlelo. Uma kwenzeka ukuthi ikhompuyutha isebenza kancane kakhulu, ngokuvamile ingaba ngenxa yokuntula inkumbulo, ngenxa yokusebenza nezinhlelo ezinzima kakhulu.
Kulawa mathebhu ungabona zonke izintambo zohlelo ngalunye olusetshenziswayo, izimbobo kanye nayo yonke imisebenzi ehlobene nenkumbulo, futhi yethulwa igrafu yokusebenza, phakathi kwezinye izakhi.
Amandla noma Amandla
Ukuya kuthebhu elandelayo sithola amandla ondla ikhompyutha yonke; indawo lapho amanani wamandla asetshenziswa yinqubo ngayinye asungulwa, ikakhulukazi ngokuya ngokusebenza kwekhadi lezithombe, izinga lomthwalo esimweni samalaptop kanye nesikhathi esisele sokusebenzisa okufanayo.
Ezinye izici ezigqamayo umthelela wamandla otholwa uhlelo lokusebenza ngalunye; isikhathi samandla esilinganisiwe kanye nokunikeza ithuba lokuvala ezinye zazo; esimweni se-laptop; ukuze ulondoloze impilo yebhethri.
Kumele kuqashelwe ukuthi akuzona zonke izinhlelo zokusebenza ezingavalwa, kuyadingeka ukuhlonipha bonke abahlobene ngokuqondile nokusebenza kwesistimu. Kodwa esimweni sezinhlelo zokusetshenziswa ngezikhathi ezithile nokwaziwa, kungenzeka ukuvala ngaphandle kwenkinga, esikhulula ngayo ukusebenza kwe-CPU.
Igrafu nayo yethulwa lapha, njengasezimweni ezedlule; kodwa okuhloswe ngayo ukuqapha ukusebenza kwamandla noma ukuphathwa kwamandla ngaphakathi kwekhompyutha.
Ithebhu elandelayo yileyo ekhomba idiski eqinile noma eqinile, ekhona ngaphakathi kwekhompyutha; okuyinto, njengoba kwaziwa, isitoreji esikhulu salo lonke ulwazi. Lonke uhlelo lokusebenza nedatha kubhalwe kule hard drive; empeleni, into yokuqala ebhaliwe yisistimu yokusebenza, ukuze inakekele konke okunye.
Kule thebhu enikezelwe ekusebenzeni kwe-hard disk, kungenzeka ukubuka wonke ama-byte abhaliwe kanye nalawo afundwa yikhompyutha. Okuhle wukukwazi ukushiya inani elithile lendawo yamahhala, ukuze idiski ikwazi ukufinyelela ulwazi ngokukhululeka.
Kuleli qophelo ungakwazi ukwazi igama lenqubo ngayinye eyenziwa ngaphakathi kwediski, ama-byte abhaliwe futhi afundwe futhi ngendlela efanayo abe negrafu yezinqubo ezenziwa kule yunithi yokugcina yangaphakathi.
Inethiwekhi noma uxhumano lwe-inthanethi
Siya kuthebhu yokugcina ye-Activity Monitor, lapho wonke amaphakethe olwazi angenayo naphumayo, ahamba ngeNethiwekhi, abalwa; Zonke lezi zinqubo zihlotshaniswa nokuphequlula i-inthanethi; ibonisa uhlelo lokusebenza ngalunye olusebenza ngaphakathi kwe-CPU.
Kule ndawo kuyenzeka ukuhlonza izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa umsebenzisi ngamunye, kungaba kunethiwekhi yendawo noma nge-inthanethi.
Konke lokhu kungagadwa, kubalwe inani lolwazi olungenayo noma oluphumayo; okwashiwo ngenye indlela, kungaba yilokho okwamukelwe futhi kwathunyelwa, ngesikhathi kusetshenziswa ikhompyutha ye-Mac. Ngokusebenzisa lesi sihloko, sincoma ukufunda Bona amadivayisi axhunywe Kunethiwekhi Yami, nezincomo zokuqapha lo msebenzi.
Ukusebenzisa I-Activity Monitor
Ukwazi umphathi wemisebenzi ye-Mac kanye nalo lonke ulwazi olungatholakala ngokulufaka; singakwazi ukuqala ngokuphepha ukusebenzisa leli thuluzi, elilula, uma sesilijwayele.
Uma befuna ukuhlola ukusebenza kwe-computer, mhlawumbe ngenxa yokuthi benomuzwa wokuthi idonsa kancane, mhlawumbe ngenxa yokuthi ezinye izinhlelo zibambekile noma ngenxa nje yokuthi bacabanga ukuthi ayisebenzi kahle ngokwanele. Ukuqapha umsebenzi kufanele kufinyelelwe ngokuzethemba.
Sifaka ithebhu ngayinye, sithatha uhambo sibonisa imihlahlandlela yokusebenza ngayinye.
Isibonelo, uma siya kuthebhu ehambisana ne-CPU, siyaqaphela ukuthi sinohlelo oluqala lapho sivula ikhompyutha, sisebenza ngemuva, esingasisebenzisi, kodwa sisebenzisa izinsiza; kungase kube kuhle ukuyivala noma ukuyikhipha.
Kodwa ngaphambi kokwenza noma yisiphi isinqumo kuhle ukuqiniseka ngalokho okuzokwenziwa; lapho kungenzeka khona ukubona imininingwane ecacile yayo yonke inqubo nokusebenza kwezicelo ezivulekile; ngoba lokhu kuyadingeka; Chofoza kuhlelo bese uchofoza ophawini olukhonjwe ngesiyingi i.
Ngale nqubo, elinye iwindi lizoboniswa, lapho lizosinika khona ulwazi oluthile lwenqubo eyenziwa uhlelo ngokusetshenziswa kwememori, kungakhathaliseki ukuthi ingokoqobo, i-virtual, eyabiwe noma iyimfihlo; Ngokwako, lokhu kusinika umbono wesisindo sohlelo olushiwo ngaphakathi kwenqubo yekhompyutha isikhathi ngasinye lapho luvuliwe noma lusebenza.
Njengereferensi sikutshela ukuthi inkinobho ethi “i” itholakala ekhoneni eliphezulu lewindi lokuqapha umsebenzi futhi eduze kwalo kunenye inkinobho ekhonjwe ngo-“X” nayo ewusizo kakhulu; njengoba ikuvumela ukuthi uvale ngokuphelele ngesikhathi esisodwa, noma iyiphi inqubo esebenzayo kukhompyutha.
Kunjalo, okokuqala kuyadingeka ukuthi ukhethe uhlelo lokusebenza ofuna ukuluvala ohlwini oluboniswa nabo bonke abakhona kukhompuyutha. Uma uhlelo selukhethiwe, inkinobho ethi X iyacindezelwa futhi yilokho; uqedele uhlelo okukhulunywa ngalo.
Enye imininingwane ethokozisayo injini yokusesha etholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini, ithuluzi elikuvumela ukuthi uthole kalula futhi ngokushesha noma yiluphi uhlelo olwaziwayo olusebenzisa izinsiza; vele ubhale igama futhi lizogqama ohlwini lapho wonke amanye akhona, kube lula ukukhonjwa kwalo ukuze limiswe.
Izinsiza Ezifihliwe Zokusebenzisa
Ochwepheshe ekuphatheni I-Mac Task Manager banqume ukuthi umsebenzi wayo wokuqapha unomsebenzi ongabonwa ngeso lenyama; kodwa ilusizo kakhulu, ngoba ngalo ungashintsha isithonjana, kuyilapho uhlelo lokusebenza luseDokhi.
Ngalokhu, umyalo ungasetshenziswa lapho ukuphathwa noma ukusetshenziswa kwezinsiza kukhonjiswa ngaso sonke isikhathi; kungaba ngokusebenza kwe-CPU, inethiwekhi noma ngenxa nje yokusebenza kwe-hard disk.
Ukuze usebenzise leli thuluzi elingaziwa kangako, kudingekile kuphela ukuvula uhlelo lokusebenza; Kamuva, ngenkinobho yesibili yegundane, sifinyelela esigabeni se-Dock Icon, lapho kungenzeka khona ukukhetha uhlobo lolwazi esifuna ukuba lubonakale, kungaba luvela ku-CPU, inethiwekhi noma i-hard disk. Uma isinqumo sesenziwe, futhi ukukhetha kukhethiwe; isithonjana siyashintsha futhi kuzoba negrafu ebonakalayo yokuqapha inqubo ekhethiwe.
Kungenzeka futhi ukuthi usebenzisa inkinobho yegundane efanele, lapho uchofoza isithonjana, imenyu yabaqaphi iyafinyelelwa; nethuba lokubeka lezi zithombe ngendlela yamafasitela amancane kudeskithophu noma isikrini sekhompyutha; ukuze ukwazi ukuhlaziya izinguquko lapho i-CPU iqala ukwehla.
Ngale ndlela uzokwazi ukunquma ngokuqondile ukuthi lokhu kungenxa yokusetshenziswa kwezinsiza ngohlelo oluthile noma ngenxa yokuntula inkumbulo, ukusebenza okujwayelekile kwekhompyutha. Njengoba ubona, imenenja yemisebenzi ye-Mac iyithuluzi elibalulekile, yingakho kufanele igcinwe iseduze eDokhini, ukuze uyifinyelele kalula ngokuchofoza kwesokudla kusithonjana se-Activity Monitor.
Uma okuqukethwe kwalesi sihloko kukuvumele ukuthi wazi ukuthi iyini i-Mac Task Manager, sincoma ukuthi ufunde izihloko ezilandelayo ezithokozisayo:
Amakhasi okuchitha isikhathi
Izigaba Ikhompyutha Ukuhamba kwethekithi
Funda ukuphatha i-Word Commands, futhi wenze lula wonke umsebenzi wakho
Funda Ukubuyisela Izithombe Ezisusiwe ze-WhatsApp?